Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. पहिलो किस्ता बुझेर घर नबनाएकाले दोस्रो किस्ता नपाउने – Emountain TV
पहिलो किस्ता बुझेर घर नबनाएकाले दोस्रो किस्ता नपाउने
काठमाडौं, ३० पुस । भूकम्प गएको ३३ महिना पुग्नै लाग्दासमेत नीजि आवास निर्माणको कामले गति लिन सेकेको छैन । हालसम्म ८५ हजार घरमात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाँकी केहीले भने पहिलो किस्ता नै पाउन सकेका छैनन् ।
पहिलो किस्ता बुझेकाले पनि दोस्रो किस्ता दाबी गरेका छैनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने गत पुष मसान्तभित्र पहिलो किस्ता बुझेर घर बनाउन सुरु नगर्नेलाई दोस्रो किस्ता नदिने जनाएको छ ।
गत पुष मसान्तभित्र आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता बुझेका ४ लाख ४० हजार भूकम्प पीडितलाई प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता बुझ्नका लागि तोकेको समयसीमा पुष ३० गतेबाट सकिएको छ । तोकिएको सीमा भित्र अधिकांश लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता बुझेका छैनन् ।
करिब ७ लाख ७० हजार लाभग्राही मध्ये करिब १ लाख भूकम्प पीडित सम्झौता गर्न नै नआएको प्राधिकरणको भनाइ छ । सम्झौता गरिसकेकामध्ये १४ अतिप्रभावित जिल्लामा करिब ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता वापतको रकम पाइसकेको र बाँकी जिल्लामा ९४ प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार गत पुष मसान्तभित्र पहिलो किस्ता लिएकाले पुष ३० गतेसम्म घरनिर्माण सुरु गरेको जानकारी प्राधिकरणमा गराउनुपर्छ । गत पुष मसान्तदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा पहिलो किस्ता लिएकाहरुले भने आगामी चैत मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता बापतको अनुदान दाबी गरिसक्नुपर्नेछ ।
हालसम्म १ लाख ८४ हजारले दोस्रो किस्ताका लागि दाबी गरिसकेको र ८५ हजार घर निर्माण भईसकेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । पहिलो किस्ता बुझेर घर नबनाउनेहरुलाई दोस्रो किस्ता वापतको रकम उपलब्ध नगराउने प्राधिकरणले जनाएको छ । घर नबनाउने तर अनुदान रकम लिनेहरुलाई रकम फिर्ता गर्नसमेत प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।
प्राधिकरणले सीमान्तकृत एकल र बृद्धबृद्धालाई भने पहिलो किस्ता बुझेर पनि तत्काल घर नबनाएकाहरुलाई सहमतिको आधारमा अर्काे प्रबन्ध गर्नका लागि छलफल भइरहेको जनाएको छ । लाभग्राहीले जुन प्रयोजनका लागि प्राधिकरणबाट रकम बुझेको हो त्यही प्रयोजनका लागि खर्च गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
धेरैले आफै घर निर्माण गर्नतिर लागे पनि रकमको जोहो गर्न नसकेका पीडित भने अझै पनि सरकारको योजना पर्खेर बसिरहेका छन् । सरकारले सहरमा घर बनाउन २५ लाख र गाउँमा १५ लाख बैंकमार्फत २ प्रतिशत व्याजमा सुलभ कर्जा दिनेसमेत घोषणा गरेको थियो ।
By: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण